Parallel Groove uqinisa
Amandla ombane e-torque okonga kukungafakwanga umthwalo, izixhobo ezisetyenziswa ikakhulu kwimigca yokuhambisa, ukuhambisa imigca kunye nenkqubo yomgca wokufaka endaweni, ukusongela kunye nokudlala indima ekhokelayo kwii-jumpers.
Isebenza kucingo lwealuminium, ucingo lobhedu, ucingo olungaphezulu oluhlanganisiweyo, ucingo lwe-ACSR, njl.njl.
I-JBL Copper Parallel Parletlel clamp
I-Parallel -Groove clamp edityanisiweyo yesinxibelelanisi somjelo sisebenza kunxibelelwano lokuthomalalisa ubunzima be-aluminium yentsimbi kunye nokucoca ucingo lwentsimbi. I-BTL uthotho lobhedu lotshintsho lwesidibanisi somdibaniso esidibeneyo sisebenza kunxibelelwano lotshintsho lobhedu olusebenzayo kunxibelelwano lwe-branching yecandelo elahlukileyo
Uhlobo lwe-H lwesinxibelelanisi sentambo
I-Wedge type clamp ilungele ukuqhubekeka okungasekelwanga okanye isebe lezinto ezingaphezulu kwe-aluminium strand wire okanye i-steel-core aluminium strand wire, inshorensi yokugquma kunye ne-clamp zisetyenziswa kunye. Ukukhusela ubushushu.
IAluminiyam Aluminium Parallel groove uqinisa
Kukho iimeko ezininzi apho unyanzelwe ukuba ufakele abaqhubi ngokuhambelana. Enye yazo kuxa ufuna ukufaka umqhubi wesibini kwiluphu evaliweyo. Ezo zicelo zifuna ukuba uthenge i-grove clamp efanayo.
I-clamp ye-groove ehambelanayo inamalungu amabini, icandelo eliphezulu, kunye necala elisezantsi. Bazoba kunye ukuze kusebenze amandla okubambana kumgca wokuhambisa. Oku kunokuba ngumtya wamandla okanye intambo yonxibelelwano.
Izibopho ze-groove zenziwe nge-aluminium enzima eyomeleleyo kwaye enganyangekiyo kwiindlela ezahlukeneyo zomonakalo wamachiza kunye nomzimba. Isinyithi ialuminiyam ikwabonelela ngokunyanzelwa okubambekayo okufunekayo xa kucofwa abaqhubi abafanayo. Ikwabonelela ngokuchasene nemitha ye-UV.
Abaqhubi be-groove abafanayo babonisa uyilo 'oluchanekileyo'. Oku kuyivumela ukuba ibambe ngokuchanekileyo kwaye inike inkxaso oyifunayo. Uyilo lukwavumela ukubamba ukuxhasa ubukhulu beekhondaktha ezahlukeneyo. Indawo efana nayo ibonelela ngeqonga apho umqhubi aya kuhlala khona.
ICampG Bimetal Parallel groove ngocingo
Isinxibelelanisi somsantsa sisetyenziselwa unxibelelwano olungenasiphelo kunye nokususa ucingo lwealuminium emxinwa kunye nocingo lwealuminium emxinwa. Isetyenziswa nesigqubuthelo sokugquma ukukhusela kunye nokufaka ucingo
Izibopho ze-groove ezifanayo zisetyenziselwa ukuhambisa okwangoku phakathi kwabaqhubi abadibeneyo. Ngaphandle kwale ndawo iphambili yesicelo se-groove clamp ezisetyenzisiweyo zikwasetyenziselwa ukukhusela ii-loops kwaye ke kufuneka zinikeze amandla ombane owaneleyo wokubamba.
Ukuba abaqhubi bezinto ezahlukeneyo banokudityaniswa oku kunokwenziwa ngokusebenzisa i-bimetal aluminium copper clamp. Kwizibopho ze-bimetal PG, le mizimba mibini yenziwe nge-alloy ye-aluminium eyomeleleyo, kwaye ukuze kuqiniswe umqhubi wobhedu, indawo enye yenziwa nge-aluminium alloy kwaye idityaniswe ngephepha elitshisayo le-bimetallic. Iibholiti zenziwe ngentsimbi eqinileyo (8.8).